पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले मर्यादा भुलेर विदेशी अधिकारीको चाकडी गर्न हुँदैन : महेन्द्रबहादुर पाण्डे - Bidur Khabar
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले मर्यादा भुलेर विदेशी अधिकारीको चाकडी गर्न हुँदैन : महेन्द्रबहादुर पाण्डे
विदुर खबर २०७६ भदौ १० गते २०:३७
नुवाकोट । नेपाल र भारतबीच क्रियाशील द्विपक्षीय संयन्त्रहरुमध्ये नेपाल-भारत संयुक्त आयोग उच्चतम संयन्त्र हो। दुई देशबीचका अड्चनलाई हटाएर द्विपक्षीय सम्बन्ध समधुर बनाउने उद्देश्यसहित स्थापित आयोगको पाँचौ बैठक यसैसाता काठमाडौंमा सकिएको छ। धेरै अपेक्षासहित बसेको आयोगको बैठकले अपेक्षित उपलब्धि दिलाउन सकेन भन्ने टिकाटिप्पनी पनि भइरहेका छन्।
अर्कोतर्फ आयोग बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट्दा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्मले कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ। यही परिप्रेक्षमा लामो अन्तरालपछि आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा ‘होस्ट’ गरेका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग तत्कालीन अनुभवको आलोकमा रहेर पाँचौ बैठकका उपलब्धिबारे गरिएको संवाद ।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक नभएको २३ वर्ष भएको थियो। म परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बिम्स्टेकको बैठकमा म्यानमार जाँदा त्यहाँ तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग भेट भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँसँग यस विषयमा कुरा गरेको थिएँ। मैले दुई देशबीचका समस्याहरुलाई स्पष्ट गरौं, समस्या समाधान गर्ने र मित्रतालाई थप सुदृढ गरौं भन्ने हिसाबले कुरा राखेको थिएँ। भारतीय विदेश मन्त्रीले पनि कुरा ठीक हो भन्नु भएको थियो। उहाँहरु त्यहाँबाट भारत फर्किँदा-नफर्किँदै त्यहाँ चुनाव घोषणा भयो।
बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीले ‘होइन यो त नेपालको स्रोत हो। नेपालले पिडिए आफ्नो स्रोतबाट विकास गर्न सक्छौं भन्छ भने त्यो हामीले नै गर्ने भनेर किन जोड गर्ने? त्यो उहाँहरुको स्रोत हो, त्यो उहाँहरुले जुनसुकै विधिबाट विकास गरे पनि गर्नुहुन्छ। बढी भएको उर्जा उहाँहरुले बिक्री गर्दा हामीले किन्ने हो। यसमा हामीले खुट्टा तेर्स्याउनु पर्दैन’ भनेर भनेपछि उनका सविचहरु पछि हटे।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकपछि हस्ताक्षर गर्दै नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे र भारतीय समकक्षी स्वराज।
बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीले ‘होइन यो त नेपालको स्रोत हो। नेपालले पिडिए आफ्नो स्रोतबाट विकास गर्न सक्छौं भन्छ भने त्यो हामीले नै गर्ने भनेर किन जोड गर्ने? त्यो उहाँहरुको स्रोत हो, त्यो उहाँहरुले जुनसुकै विधिबाट विकास गरे पनि गर्नुहुन्छ। बढी भएको उर्जा उहाँहरुले बिक्री गर्दा हामीले किन्ने हो। यसमा हामीले खुट्टा तेर्स्याउनु पर्दैन’ भनेर भनेपछि उनका सविचहरु पछि हटे। अन्तिमसम्म त्यसरी विषयहरु टुंग्याउँदै सहमतिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौं।
महाकाली नटुंगिएपछि सुस्ताको फाइनल कुरा यो हो भनेर उनीहरुले भने, हामीले मानेनौं। त्यही भएर सुस्ता अल्झिएको हो। महाकाली सल्टियो भने सुस्ता सल्टिन समय लाग्दैन। तर, महत्वपूर्ण कुरा महाकालीमै हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे।
महाकालीमा भारतीय सेनाहरु ब्यारेक बनाएर बसेका छन् रे। हाम्रो भूमिमा ब्यारेक बनाइएको छ भने त हामी छोड्दैनौं। भारतीयहरुको कुरा के छ भने ‘हामी रणनीतिक ठाउँमा ब्यारेक बनाएर बसिसकेका छौं। त्यो हाम्रै भूमी हो। त्यसमा नेपालले ‘कन्सिडर’ गर्नुपर्छ।’
‘भौगोलिक खण्डनका कुरामा ‘कन्सिडर’ गर्ने कुरा आउँदैन। कसैले पनि हाम्रो भूगोललाई तोड्न र छोड्न सक्दैन। तपाईंहरु आफ्नो भूमिमा सर्नुपर्छ, हाम्रो भूमी छोड्नुपर्छ’ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। उनीहरुको भनाइ के थियो- ‘त्यो हाम्रो भूमी हो, हामीले नेपालको भूमीमा बनाएकै होइन।’ हामीले भनेका थियौं- ‘किन छैन? तथ्यहरु ल्याऊँ। मान्छे बसेको, जमिनको तिरो तिरेका कुरा छन्। हामी तथ्यलाई आधार बनाएर छलफल गरौं’ न भनेपछि त्यो कुरा अहिले टुंगिन सक्दैन, माथिल्लो तहमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तहमा पन्छाइदिने काम भयो। पछि नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि त्यो विषय अहिले समाधान हुन सक्दैन भनेर अल्झाइराख्ने काम भयो।
भारतीयहरुको कुरा के छ भने ‘हामी रणनीतिक ठाउँमा ब्यारेक बनाएर बसिसकेका छौं। त्यो हाम्रै भूमी हो। त्यसमा नेपालले ‘कन्सिडर’ गर्नुपर्छ।’
तत्कालीन अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादाको सबैभन्दा बढी उल्लंघन मेरै प्रधानमन्त्री (शुशील कोइराला)बाट भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भेटेको थाहा पाएपछि मैले त्यही दिन उहाँलाई भेटेर त्यसबारे उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले ‘मलाई हतार भयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, अब चाहिँ मान्छु’ भन्नुभयो।
घर-घरमै धेरै भेट्ने गर्नु हुँदैन। अफिसमा भेट्नुपर्छ। कुनै राजदूतलाई, कुन विदेश सविचलाई भेटेको हो त्यसको नोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। त्यो सार्वजनिक गरिँदैन, तर त्यो मन्त्रालयको स्मरणमा राखिन्छ। त्यो पद्धति हामीकहाँ हुनुपर्ने। म मन्त्री हुँदा पनि त्यो प्रयत्न गरेको हुँ। तत्कालीन अवस्थामा त्यसको सबैभन्दा बढी उल्लंघन मेरै प्रधानमन्त्री (शुशील कोइराला)बाट भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भेटेको थाहा पाएपछि मैले त्यही दिन उहाँलाई भेटेर त्यसबारे उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले ‘मलाई हतार भयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, अब चाहिँ मान्छु’ भन्नुभयो।
मैले हुन्छ भनें। तर, त्यसभन्दा पछाडि त्यही मान्छेसँग उहाँले फेरि भेट गरेको थाहा पाएँ र के हो भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले ‘आइहाल्यो’ भन्नुभयो। ‘त्यसरी आइहाल्दैन नि। उ त समय लिएर आउँछ नि, त्यसो गर्न हुँदैन’ भनेँ। मेलै मेरै पार्टीका नेताहरुसँग पनि भनेको थिएँ कि यो प्रोटोकललाई मानौं। मर्यादामा बसौं। परराष्ट्रले कूटनीतिक आचारसंहिता बनाएको छ त्यसलाई मानौं। तर, त्यो अहिले पनि लागू भएको छैन।